अहिलेको मौसम र स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
माघ १, २०७७ बिहिबार १२:२०:५० | डा. वासुदेव पाण्डे
हिजोआज देशभर नै तापक्रम घटबढ भैरहेको छ । कहिले बिहान बेलुकी चिसो र दिउँसो गर्मी हुन्छ भने कहिले चाहिँ दिउँसो पनि चिसो हुन्छ । छिनछिनमा हुने तापक्रमको फरकले विभिन्न स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ । नेपालमा मात्र नभएर अरु देशहरुमा पनि यस्तो समस्या देखिने गरेको छ ।
उदाहरणको रुपमा साउदी अरेबियालाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ बाहिर एकदमै गर्मी हुन्छ । अनि कोठामा चिसो हुने भएकाले धेरैमा स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ । तापक्रममा फरक परेर एक्कासी चिसो हुँदा मुटु र दमका रोगीहरुमा धेरै समस्या पार्न सक्छ ।
नेपालमा पनि कहिलेकाहीँ छिनमै एकदमै चिसो र छिनमै तातो हुन्छ । केही दिनअघि पनि यस्तै भएको थियो । जसले मुटु र दमका बिरामीलाई धेरै नै समस्यामा पार्यो । बिहान बेलुका चिसो र दिउँसो गर्मी हुँदा श्वासप्रश्वासमा समस्या हुन सक्छ ।
तापक्रममा हुने फरकले कोरोनाका बिरामीलाई पनि असर पार्छ । कोरोना भाइरस चिसोमा धेरै बेरसम्म बस्न सक्छ भनेर विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । केही दिनअघि दिउँसोको समयमा २० डिग्री सेल्सियसभन्दा धेरै तापक्रम पुगेको थियो भने बिहान ३ देखि ४ डिग्रीको हाराहारीमा थियो । चिसो समयमा कोरोना भाइरस सतहमा धेरै बेर बस्न सक्छ । त्यही भएर सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा हाम्रो कोरोनासँग लड्न सक्ने क्षमता १४ देखि १५ प्रतिशत देखिएको छ । फेरि भाइरसले रुप परिवर्तन गरेमा धेरैलाई सार्न सक्छ भनिएको छ । अहिले रुघाखोकीका बिरामी बढेका छन् । मौसममा हुने परिवर्तन र प्रदूषणका कारण रुघाखोकीका बिरामी बढेका हुन सक्छन् ।
परीक्षण नगरि रुघाखोकी मात्र हो वा कोरोना भएको भन्ने छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । के भएको हो भन्ने जान्नका लागि परीक्षण गर्नु पर्छ । डेङ्गी, रुघाखोकी र कोरोनाको लक्षण उस्तै हुन्छ । यीमध्ये जे भएको भए पनि शरीर दुख्ने, मांसपेशीमा असर पार्ने त हुन्छ नै ।
कोरोना हुँदा अलि धेरै ज्वरो आउँछ । तर कतिपयलाई लक्षण नदेखिने भएकाले कोरोना भएमा धेरै ज्वरो आउँछ नै भन्ने चाहिँ होइन । कतिपयमा कोरोना लागेको बेला सुख्खा खोकी लाग्ने गरेको पनि पाइएको छ । तर पनि हेरेर छुट्याउन भने सकिँदैन । परीक्षण गरेर मात्रै छुट्याउन सकिन्छ ।
चिसो भएको बेला बालबालिकाहरुमा रोटा भाइरसका कारण डाइरिया हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । कोरोना चाहिँ १५ वर्ष उमेरभन्दा कमका बालबालिकामा कम नै देखिएको छ । कोरोना भाइरसले ५५ वर्ष उमेर समूहभन्दा माथिकालाई बढी समस्या देखिन्छ । त्यस्तै विभिन्न खालका दीर्घरोगी क्यान्सर भएका, मृगौलाको डायलाइसिस गराइरहेका र गर्भवतीहरु पनि जोखिम समूहमा नै पर्छन् । उमेर पुगेका तर अरु रोग नभएकाहरुमा पनि कोरोनाको जोखिम धेरै हुने गर्छ ।
अब पनि बिहान बेलुका चिसो र दिउँसो गर्मी हुन सक्छ । अझ अहिले त मौसम बदली मात्र होइन प्रदूषण पनि बढेको छ । त्यस कारणले गर्दा मुख्य रुपमा खानपिनमा नै ध्यान दिनुपर्छ । चिसोबाट बच्ने उपायहरु अपनाउनुपर्छ । मास्क लगाउन छोड्नै भएन । स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ ।
कोरोना सङ्क्रमितको संख्या कम हुँदै जानु खुशीको कुरा हो । कोरोना मात्र होइन अरु रोगका बिरामी पनि अहिले कम नै छन् । रुघाखोकीका बिरामी बढेका छन् । चिसो र प्रदूषणको कारणले गर्दा रुघाखोकीका बिरामी बढेका हुन सक्छन् । तर गएका वर्षहरुमा जस्तो धेरै निमोनियाका बिरामी अहिले देखिएका छैनन् ।
पछिल्लो समय मानिसहरुले सरसफाइमा ध्यान दिन थालेका छन् । स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न थालेका छन् भने उनीहरुमा चेतनाको स्तर पनि बढेको छ । त्यही कारणले गर्दा पनि अरु रोगका बिरामीहरु गएका वर्षको तुलनामा कम भएका हुन सक्छन् । तर सावधानी चाहिँ अपनाउनुपर्छ ।
(इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डेसँगको कुराकानीमा आधारित)
अन्तिम अपडेट: असार १८, २०७८